Virusiin dorgommii aangoo (power struggle) EPRDF qabe obbo Lammaa Magarsaa galaafate – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsVirusiin dorgommii aangoo (power struggle) EPRDF qabe obbo Lammaa Magarsaa galaafate
Liban Gadaatiin, Ebla 20, 2019
Virusiin dorgommii aangoo (power struggle) EPRDFn nyaatee fixaa jiru jaarmiyoolee utubtoota isaatti gadi bu’ee, mahaandisa jijjiiramaa kan jedhamee ilaalamaa ture obbo Lammaa Magarsaa galaafatee jira.
Dubbii muudamaa fi jijjiirraa qondaalota ol’aanoo ODP kalee godhame irratti hundaahuduudhaan waan hedduutu jedhamaa jira.
Duraan dursa EPRDF irraa jalqabna. EPRDF jaal’atee osoo hintaanee dhiibbaa qabsoo ummataa irraan kan ka’e wareegama guddaan erga kafalamee booda akka duraaniitti aangoo irra turuun akka hindandaymne hubachuudhaan of jiraachiisuu fi yoo dandayame ammoo aangoo irra turuuf ijibbaata isa dhuma godhe. Ijibaati inni dhumaa maali? Walgahii guyyaa dheeraa fudhate erga geggeessanii booda Akkuma EPRDFtti walgahanii ”Haaromsa gadi fageenyaan” (ጥልቅ ተሃድሶ) geggeessuuf waliif galanii hojiitti seenan. Sana booda obbo Muktar kadir faa bulchiinsa Mootummaa naannoo Oromia irraa bu’anii obbo Lammaa Magarsaa faa aangootti dhufan. Tigray keessattis Abay Woldu faa bu’anii Dr. Debretsionfaa Federaala irraa gara angoo bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraytti deebi’an.
Akka kanaan MM ministeeraa kan biraa jijjiiruudhaan Dr. Abiy angootti dhufee murtii jijjiiramaa adda addaa fudhachuudhaan deggersa haga tokko biyya keessaa fi alattis argamsiisee jira. Haa tahu malee biyyicha keessatti nagaan bu’ee haaromsa waliigalteen jalqaban, waliigalteen itti fufuu hindandeenye. Haalli kun EPRDF aangoo irra akka turu haa gargaaru malee jaalalli akka jaarmiyaatti gidduu isaanii ture akkuma duraan turetti jabaate akka itti fufu hingoone. Biyyicha keessattis nagaan bu’uun hafee haalli siyaasaa biyyicha keessatti yeroo ammaa deemaa jiru caalaatti hammaataa deemaa dhufe. Deemsa kana keessatti haalli uumame jaarmiyolee 4n EPRDF keessa jiran jidduutti fedhii aangoo dhuunfachuuf jecha waldorgommii fi wal dhabbii hamaa uume.
Dorgommiin aangoo dhuunfachuuf jaarmiyolee EPRDF 4n gidduutti deemaa jiru kun achumatti hindhaabbanne. Jaarmiyolee afran tokkoo – tokkoo isaanii keessattis gadi seenee gartuun adda addaa umamuudhaan okkorri aangoo dhuunfachuu, mul’ataa fi dhkoksaatti jarmiyoolee kana keessatti deemuu jalqabe. Sababa kanaa irraa kan ka’e haaromsi waligalteen geggeessuuf jalqabame yeroo ammaa kana daranuu danqamaa dhufee jira. Haalli kun TPLF irraa kan hafe jaarmiyolee sadan keessatti guddisee mul’achaa jira. Jaarmiyaa worra kibbaa (SEPDM) yoo fudhanne har’a akka jaarmiyaatti waliin sosso’uunillee rakkoo guddaa tahee ifatti mul’ata. ANDM fi OPDO jedhamanii kan waamamaa turan yoo fudhanne ammoo jalqaba irratti wal tahanii TPLF irraa aangoo fudhachuutu mul’ate. Akka kanaan maqaa isaaniillee ADP fi ODP jedhanii bifuma walfakkaataan jijjiiratan. Sun tahuyyuu EPRDFn daran laamshesse malee jabeessuu hindandeenye.
Rakkoon aangoo irratti wal hiruu kun gadi bu’ee ADP keessatti gartuu Gadu Andargachew fi gartuu Dr. Ambachew Mekonnen gadi baase. Gartuun kun wal sukkumaa turanii, duraan gartuun Gadu irra aane gartuun Dr. Ambachew dhiibamee ture. Mootummaan MM. Dr. Abiy rakkoo kana irra aanuuf Dr. Ambachew gara federaalaatti fide. Garuu dhukkubi aangoo dhuunfaa gaafa nama qabe waan hinfayyineef rakkoon gartuu lamaan gidduutti jalqabee ture itti fufee, gartuun Dr. Ambachew deebisee garagalchuudhaan aangoo dhuunfatee. Dr. Ambachewn aangoo Federaalaa irraa yeroo gabaabaa keessatti gadi dhiisee deebi’ee itti aanaa dura taa’aa ADP ta’uudhaan presidaantii BMNA ta’ee muudame, akkasitti Gaduu Andargachew galaafatee. Gadun amma kan Federaalatti dhufee ministeera dantaa alaa akka tahu godhamee rakkoo akkasittiin uumame irraa kan ka’e malee akka maddeen tokko tokko irraa himama jirutti haala nagaa keessatti MM Dr. Abiy itti yaaduudhaan mootummaa Federaalaa jabeessuuf jecha kan godhame miti.
Akkasuma aangoo irratti wal qabuun kun ODP keessattis bifa mul’atuunis dhoksaanis deemaa jaarmiyicha soofaa jira. ODPn gartuu adda addaatti hiramuu maddeen tokko-tokko irraas dhagahamaa jira. Gartuu Shimalis Abdisaafaa fi obbo Lammaa gidduutti rakkoon erga umamee turee jira. Haaluma kana irratti hundaahuudhaan, maqaa fi jaalala obbo Lammaan qabu san itti dhimma bahuu mararsiifachuu irraa kan ka’e MM Dr. Abiy, Shimalis Abdiisaa gara Federaalaatti ol dhufee sadarkaa ministeeraatti akka muudamu godheyyuu dorgommiin aangoo dhuunfachuu jalqabde sun waan dhaamuu hindandeenyeef lafa jala deemaa turte. Maayyii irratti akkumaa naannoo Amharaatti tahe sanatti gartuun Shimalis ODP keessatti ol’aantummaa argatee, aangoo Federaalaa irra yeroodhuma gabaaabaa erga turee booda deebi’ee osoo miseensa caffeellee hintahin itti aanaa presidaantii BMNO tahuudhaan aangoo dhuunfatee jira. Akka kanatti motora jijjiiramaa jedhamee kan waamamaa ture obbo Lammaa Magarsaa Oromia irraa dhiibamee bakka barbaachisummaan isaa yeroo ammaa kanatti mul’ataa hintaanetti darbamuu danda’ee jechuudha.
Odeeffannoon Kun dhugaa qabatamaa walgahilee Koreelee gidduu jaarmiyolee lamaanuu keessaa argame irra kan maddu malee oduu jibbaa fi masaanumaa gartuu siyaasaa irraa ka’ee ololaaf jecha kan deemu akka hintaanes hubatamuu qaba. Odeeffannoo dhihaachaa jiru amanuuf amanuu dhabuun kan abbaa tahee, dubbichi garuu kan oduun hafu osoo hintaanee guyyuma guyyaan qabatamaanis ofiinuu mul’achaa kan deemuu taha.
Kanaafuu yeroo ammaa kanatti dorgommii aangoo irraa kan ka’e gartuulee adda addaatti hiramanii okkoraa fi aangoo irraa wal dhiibbachuu fi wal buusuufi wal baasuutu deemaa jira jechuu dha. Inni kun garamitti nu geessa isa jedhu dunuunfatanii miira gartuu irratti hundaahuudhaan, ta’innaalee adda addaa dhugaa irraa maddan ilaaluu hanqachuun ija gartuu qofaan yoo ilaalan gaaga’ama akka walootti, akka Oromootti dhufuu dandahu arguun nama rakkisa. Dhugaadha siyaasa keessatti namni qooda fudhatu hundumtuu, hawwii fi akeeka ofii fedhu qaba, milkaahuu hawwii fi akkeka ofiif qaban kanaafis waan hingoone hinqaban. Wanni godhamu kun hundumtuu garuu haga dandayametti dhugaa qabatamaa iraa dhaabbatamee yoo hojjetame malee akeeka deemaniif irra gahuun guddoo rakkisaa fi caalaatti wareegama kan nama kafalchiisu ta’a. Haaluma kanaan Obbo Lammaa Magarsaa Presidantummaa BMNO irraa kan ka’e mootummaa federaalaa jabeessuuf jechuudhaan dubbii dhugaa hinqabneen dagamuu hinbarbaachisu.
Kanaafuu Dugaa dubbanna!
Lemma Megersa is a great leader who was tested in crises and led an opportunity of political reform. I’m grateful for his contribution. Now, the selfie man, @ShimelisAbdisa, is replacing him and we will see the consequences of the internal power struggle. https://t.co/NlAAd13E5L
— 𝔹𝕖𝕗𝕖ℚ𝕒𝕕𝕦 ℤ. ℍ𝕒𝕚𝕝𝕦 (@befeqe) April 18, 2019
The reshuffling/recycling continues. The power struggle between the power mongering leaders of ODP and ADP horizontally and within members of each parties will further take #Ethiopia into a mess. https://t.co/V8Q8X0JA1P